Kardemir သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တင်ရန် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာရထားလမ်းKardemir တစ်ဦးက New ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုမိုနူးညံ့ခဲ့
Kardemir တစ်ဦးက New ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုမိုနူးညံ့ခဲ့
21 / 10 / 2017 ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ
Kardemir ကုမ္ပဏီကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုနူးညံ့ပြီးမြောက်ရန်သစ်တစ်ခုကန်ထရိုက်တာကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအာဏာပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့နူးညံ့သော "System ကိုစုဆောင်း BOF converter နှင့်သတ္တုတွင်းတွင်းဖုန်" ပြီးစီးခဲ့ထားပြီး 12.10.2017 အပေါ်အစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီအတွက်သင်ယူမှုအခွင့်အာဏာ။
"BOF converter နှင့်သတ္တုတွင်းတွင်းဖုန်စနစ်စုဆောင်းခြင်း" ဟုအဆိုပါတင်ဒါအင်ဂျင်နီယာအတွက် ALF အသင့်တော်ဆုံးလေလံကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများသည်ယနေ့ Kardemir ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝယ်ယူမှုဦးစီးဌာနတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၏ရလဒ်အဖြစ် Kardemir ပါတီများနှင့်အတူကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများကနည်းပညာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူညီချက်များပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ protocol သည်မှ General Manager ကိုယ်စား Kardemir သဘောတူညီချက်အပြီးပြင်ဆင်ယ်ယူခြင်း Manager ကို Unal Ercüment Harun Cebeci အဆိုပါ ALF အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုကကိုယ်စား, လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတစ်ဦး protocol ကိုအရာရှိ Cem Özdemiroğluလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
နုအင်ဂျင်နီယာရုံးမှ Cem Özdemiroğlu Kardemir မှ General Manager Ercüment Unal နှင့်အတူတို့လက်လှုပ်ဘို့ ALF "System ကိုစုဆောင်း BOF converter နှင့်သတ္တုတွင်းတွင်းဖုန်" ဟုသူကနှစ်ဖက်စလုံးကိုနူးညံ့Karabükနှစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေခြင်းငှါအလိုရှိကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Unal ကြေညာချက်ကိုအောက်ပါထင်မြင်ချက်ပေး၏:
သင်သိသည့်အတိုင်း "ငါမစ္စတာ Rafet အခွန်ကောက်ခံမှုရက်သတ္တပတ်မြို့တော်ဝန်အတိတ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နှင့်အတူတွဲဖက်အတွင်းကျင်းပမယ့်ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီဒါဝေးကိုဖန်ဆင်း, ပြီးတော့ငါပြက္ခဒိန်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ခံရဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤဖော်ပြချက်အဓိကအား Sinter, ကိုကာကိုလာ, ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုနှင့် Steelworks ဒေသကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီးလျှင်မြန်စွာကောက်ချက်ချသည်ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှငါနဲ့တူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြီးစီးပြောသည် 2018 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ? အကြောင်းကိုအဆုံး 50 မှာသက်ဆိုင်သောတင်ဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စတင်မည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ တနည်းကား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဒုတိယဝန်ကြီးမစ္စတာ Mehmet Ceylan, ပတ်ဝန်းကျင်၏အစ္စတန်ဘူလ်ဝန်ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုများနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးထားသတင်းအချက်အလက်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာကိုဆက်ကပ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန်ထရိုက်တာသည်သူ၏ကိုပိုပြီးနူးညံ့ပြီးစီးခဲ့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအပါဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ System ကိုအင်ဂျင်နီယာစုဆောင်းခြင်း BOF converter နှင့်သတ္တုတွင်းတွင်းဖုန်အဆိုပါ ALF မှတင်ဒါ firms've ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအလျင်အမြန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယခုနှစ် 2018 ၏အဆုံးအားဖြင့်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ ယင်းပါတီများအဘို့နှစ်ခုလုံးကိုကျနော်တို့ရဲ့Karabük'üအတှကျကောငျးဖွစျဖို့အလိုရှိ၏။ ကျနော်တို့ဖုန်စုစည်းမှုနှင့် Sinter စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာမှကန်ထရိုက်တာကိုထပ်ဖုန်ဇွန်လထဲမှာကြေညာခဲ့သည်နှင့်အများပြည်သူသိအဖြစ်တနည်းကား, အမျိုးမျိုးသော ALF ပွိုင့်စနစ်များတည်ထောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်။ ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖို dedusting system ကိုနုနှင့်နူးညံ့သောဗုဒ္ဓဟူးနေ့နိုဝင်ဘာလ 8 2017 အတွက်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒီရက်သတ္တပတ်၏အစအဦးမှာဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းလျင်မြန်စွာဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောစီမံကိန်း၏အဆုံးမှအပြည့်အဝနှစ်ကအစပျိုးပါလိမ့်မယ်။ ဇန်နဝါရီလ 2018 လည်းငါတို့ they'm ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာထည့်ခြင်းရှိမရှိ, ရှိသမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့ start နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတမြို့တော်ဝန်ကတိထားတော်အဖြစ်, လယ်ပြင်၌ရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု mounting အလုပ်အရပ်ဌာနနှင့်အတူဆွေးနွေးကြမည်စည်ပင်သာယာ Kardemir ကြောင်းပြသထားတယ်။ "
ဇွန်လ Lime စက်ရုံအတွက်ယခုနှစ်တွင်စနစ်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပြန်တမ်း Kardemir ဧရိယာ dedusting ယခင်က 50 မီဂါဝပ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ, ဗဟိုစွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံ, ဇီဝဗေဒကုသမှုစက်ရုံ, OPG 100 ဘွိုင်လာ Electro Filter ကိုစနစ်များ, BOF ဓါတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးစနစ်အသစ် sinter လျှပ်စစ် filter များနှင့်အိတ်ဖုန် ဖုန်မှုန့်စုစည်းမှုစနစ်, 50 t / h စွမ်းရည်ဓာတ်ငွေ့ Air ကိုအရည်အသွေးဘူတာ, Akdeniz Thermal Power ကစက်ရုံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်း, Project မှကို C မိုးရွာနိုင်ရေကူးကန်, အပူပိုင်းဓါတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးစနစ်, စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း, ဘွိုင်လာ, စနစ်များစုဆောင်းခြင်းရောင်ခြည်အတိုင်းအတာဘူတာ, Converter ဓါတ်ငွေ့စုရုံးခြင်းစနစ်, Converter က Secondary ဖုန်ပစ်ခတ် ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် Air အရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း, ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖို2နှင့်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲ3Peak ဓါတ်ငွေ့ Analyzer စနစ်များ, အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်မှု (Powder + ဂတ်စ်) တိုင်းတာခြင်းစနစ်, overhead ပါဝါလိုင်းများစက်ရုံအထွေထွေနှင့်သောက်သုံးရေလိုင်းအပြောင်းအလဲများ, Akdeniz သောက်သုံးရေပိုက်လိုင်းအစားထိုး, နယူး slag အကဲဖြတ် Facility, Desulphurization စက်ရုံ (ဖုန်ငွေကောက်ခံစနစ် ပါဝင်သည်), နယူး junkyard ခန်းမ, စာနယ်ဇင်းရွှံ့နွံ Dewatering စက်ရုံ,3Filter ။ ရေနှင့်ရေစနစ်များ, ကိုကာကိုလာစက်ရုံဖုန်နှိမ်နင်းရေးစနစ်များ, 1 Nolan ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုဖုန်ငွေကောက်ခံစနစ်, 1 Nolan ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖို Chargers နှင့် dedusting စနစ်, ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုသတ္တုထုတ်ယူခြင်းဖုန်နှိမ်နင်းရေးစနစ်, ESP Sinter 1 နှင့် sinter2စက်အေး continuous ကာစ်စက်ရုံ? s ကို၏စောင့်ရှောက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်၏ဗဟိုစွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံဘူတာအွန်လိုင်းသက်တမ်းတိုးသူတို့အကြောင်းကို 100 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြီးစီးခဲ့သည်အတိုင်း။
Kardemir အဓိကလမ်းမကြီးများ၏စက်ရုံ site ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆက်လက်အတွင်းတည်ရှိပြီးသောခရီးစဉ် concreting နိုင်ရန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချရန်စနစ်များနှင့်အမှုန်များစုဆောင်းခြင်းစက်ရုံဖုန်နှိမ်နင်းနေဆဲစက် desulfurization အပင်များ, ဇီဝဗေဒကုသမှုစက်ရုံတိုးတက်မှု၏ sinter 1-2 နှင့်3Flue ဓါတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
Kardemir ထံမှ 300 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
အဆိုပါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေဂျင်စီက၏ဝန်ကြီးများ, Kardemir ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြည့်ပါ
KARDEMİRသည်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ခုကိုပြီးစီးခဲ့သည်
အမိန့်ရထားလမ်းဘီးလိုင်းများအတွက် Kardemir အပူကုသမှုစက်ရုံ
တစ်လလျှင် Kardemir9180 သန်းဆီးနှင်းရှိပါတယ်
ယူကရိန်းသံအမတ်ကြီး Kardemir လညျပတျခဲ့
စီးပွားရေးလည်ပတ်ဝန်ကြီးဌာနအတွက် Kardemir ဗျူရိုကရက်
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ကိုက်ညီ Mota, Evkur အသင့်ဖြစ်ပြီလား
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အ 22 1927 အောက်တိုဘာလ-Filyos Filyos မြစ်လိုင်းများတွင်အတွက် ...